Eyona nkqubo ilungileyo yokubuyisela ifoto | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | | Ihlaziywe 19/03/2022 00:01 | Ukufota, Ezahlukeneyo
Xa sithetha ngazo iinkqubo photo retouchNgokukhawuleza, inkqubo yeenkwenkwezi, i-Adobe Photoshop, ifika engqondweni. Kodwa kukho ubomi ngaphaya, ukuthetha ngokubambisana, iPhotoshop, kwaye kule post, siza kukunika ukhetho lweenkqubo ezahlukeneyo onokuthi uhlele ngazo iifoto zakho.
Namhlanje kwihlabathi lobugcisa, Imifanekiso yinto ebaluleke kakhulu yokwenza isicwangciso esilungileyo, kwaye ngaphezu kwayo yonke into kubalulekile ukuba babe nonyango olulungileyo, oko kukuthi, ukuba zenziwe ngeyona ndlela ingcono, ziye zahlaziywa ngokuchanekileyo, kuba kukho iimpawu ezininzi kunye neengcali zobugcisa ezithi ngale mifanekiso zenze umxholo zombini imikhankaso yentengiso, enjalo. njengoko bezisebenzisa kwiiwebhusayithi zabo ukuze bazazise.
Kukho inani leenkqubo ezahlukeneyo, ukwenza izinto ezingenakubalwa, ukukunceda ufumane iinkqubo zokubuyisela ifoto siza kukwahlula ngokweendidi, ngoko kuya kuba lula.
1 Iinkqubo zokubuyisela ifoto kwinqanaba eliphezulu
1.3 I-Adobe Lightroom
1.4 Ifoto yoBucala
1.5 Ivenkile yokupeyinta iPro
2 Iinkqubo zokubuyisela ifoto kwinqanaba elisisiseko
2.3 I-Luminar 4
Iinkqubo zokubuyisela ifoto kwinqanaba eliphezulu
Kweli candelo, ifoto retouch kunye neenkqubo eziphambili zokuhlela ziya kuvela. Ukufezekisa iziphumo zobungcali, awuyi kuba nenye yezi nkqubo, kodwa kuya kufuneka uchithe ixesha lokufunda indlela yokuzisebenzisa.
Ngaphandle kwamathandabuzo, inkqubo esiboniswa yi-Adobe, yeyona ndawo iphambili. IPhotoshop yinkqubo yereferensi yokubuyisela ifoto enkosi kumathuba ayo angapheliyo.
yenye yeenkqubo eyona isebenzayo, inamandla, inamandla, njengoko sifuna ukuyichaza, malunga nokuhlelwa kwemifanekiso namhlanje, kunye neyona nto isetyenziswayo. Ukongeza, inqaku elilungileyo ekufuneka longezwe kuyo sisixa esikhulu solwazi, nokuba sisithuba esinje, izifundo okanye iingcebiso, esinokuzifumana kwi-intanethi ukuze sikwazi ukwenza izinto ezimangalisayo ngeprogram.
I-Adobe Photoshop isekela iintlobo ezahlukeneyo zeefayile zemifanekiso, isebenza kunye nenkqubo yomaleko, apho ukusebenza kuya kukhawuleza kwaye kuququzelelwe, kuba siya kukwazi ukuguqula, ukudibanisa okanye ukuphelisa iileya ngemifanekiso esiyifunayo. Inezixhobo eziphambili ukubuyisela umbala, ukususa iziphako, ukubona iitoni zesikhumba, oko kukuthi, izixhobo eziphuculweyo zokulungisa ngokuzenzekelayo, kunye nezihlungi ezikuvumela ukuba ungeze iziphumo kwimifanekiso.
Ngenye ye eyona nkqubo iphambili yasimahla yokuhlela, kukho iingcali ezibeka phantse kwinqanaba elifanayo nePhothosop. Inika ukuhlelwa komfanekiso ngesiphumo sobuchule.
Njengakwimeko yangaphambili, i-GIMP nayo isebenza ngenkqubo yomalekoUkongeza, ibonelela ngezihluzi, izixhobo ezininzi zemibala, ukhetho lokupeyinta, ukubonisa, ukususa amabala, izithunzi, ukuguqula ubungakanani, njl.
Inkqubo ijolise ikakhulu kubafoti, I-Lightroom sisixhobo esifanelekileyo sokuhlela umfanekiso wedijithali. NgeAdobe Lightroom, unokulungelelanisa, uhlele kwaye wabelane ngeefoto zakho ngekhompyuter, iselula okanye ithebhulethi.
yenziwe ukunceda abasebenzisi kuyo yonke inkqubo yomsebenzi, ukusuka ekukhupheni iifoto, ukulungiswa kokugqibela kunye nophuhliso lwe-RAW.
Enye yeendlela ezizezinye esinokuzifumana kwi-Adobe Photoshop, zombini ngokwezoqoqosho kunye nenokwenzeka.
Njengazo zonke iinkqubo esizibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, iFoto ye-Affinity ikwasebenza kunye nenkqubo yokuhlela eyakhiweyo, yinkqubo esebenza kakuhle kakhulu ekudityanisweni ko maleko, ukusetyenziswa kwezixhobo zokugxila, i-HDR okanye imifanekiso ye-360 degree. Ukongeza ekuvumeleni ukudityaniswa kwezinto ezikrelekrele.
Ivenkile yokupeyinta iPro
Olunye ukhetho olulungileyo, ukuba ufuna ukuba nenkqubo yokubuyisela umfanekiso, kukuba ishedyuli yentlawulo.
Ivenkile yepeyinti Pro Ingasetyenziselwa zombini ingcali kunye nomsebenzisi ophakathi.. Inayo yonke into oyifunayo ukuze ulungelelanise kwaye uhlele imifanekiso yakho. Inenani elikhulu leempembelelo kunye nezihluzi ukuxhaphaza ubuchule bethu.
Ikuvumela ukuba wongeze iziphumo ngokukhawuleza okanye ubuyisele naluphi na uhlobo lweefoto, kwakhona ngale nkqubo iifoto zinokufunyanwa naphi na emhlabeni, ngokusebenzisa idatha encanyathiselwe kwimifanekiso.
Iinkqubo zokubuyisela ifoto kwinqanaba elisisiseko
Ukuqala ukusebenzisa iinkqubo zokubuyisela ifoto, akukho mfuneko yokwazi ukuba basebenza njani, okanye ube nenqanaba lokucofa, sinokuqala ukusuka kwinqanaba elisisiseko. Kweli candelo siza kukubonisa iinkqubo ezinezixhobo ezilula zokukunceda wenze imifanekiso yakho yokuqala.
Yiyo Inkqubo epheleleyo kakhulu, apho siya kufumana i-interface efana ne-Photoshop. Yisoftware enengqondo, ebonelela ngezixhobo zokuhlela ekulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye uya kuba nakho ukwenza uhlelo olukhawulezayo.
Yiyo inkqubo kuguqulelo lwewebhu ngoko inojongano olomeleleyo, efana nePhotoshop, njengoko besitshilo ngaphambili. Sebenza ngenkqubo yomaleko, izihluzi ezahlukeneyo kunye nokhetho lohlengahlengiso.
Yiyo Umhleli weefoto kwi-intanethi, enojongano onokusebenza ngayo ngokukhawuleza nangokulula. I-Ribbet, ngokusebenzisa ulawulo lwayo oluphambili, okanye ubuninzi bemiphumo, ivumela ukuhlelwa kwezinto zomfanekiso, ukongeza kumanyathelo okuhlaziya, ukulinganisa okanye ukukwazi ukuyijikeleza.
Njengoko sesitshilo, kuye kwenzeka iinketho zokuhlela ifoto eziphambili, ikuvumela ukuba uguqule umfanekiso ngokuchukumisa kanye, kwaye usebenze ngokukhawuleza njengayo nayiphi na enye inkqubo yokuhlela.
Izichazi ezibini ekuchazwa ngazo inkqubo yeLuminar 4 zezi, kulula kwaye inomdla. Yinkqubo eqhutywa liqela leSkylum. Ngumhleli womfanekiso ochazwa ngu a eyona nkqubo yokuhlela ifoto, inezixhobo ezahlukeneyo ezenza kube lula ukugqiba umfanekiso ngokukhawuleza kunye nesiphumo esimangalisayo.
Sisicelo sasimahla, esivulelekileyo, enika ithuba elikhulu lezixhobo zokuphinda ucofe ifoto. I-Darktable yenzelwe unyango lwemifanekiso evela ngqo kwikhamera.
Ngokujonga okufana nenkqubo ye-Lightroom, kuya kuba lula kakhulu ukuyisebenzisa. Inezixhobo ezininzi, ukhetho lohlengahlengiso kunye namathuba ahlukeneyo okuthumela ngaphandle.
Kule meko, sikunikeza a inkqubo yokupeyinta yedijithali yasimahla, isoftware yasimahla. I-Krita ine-interface enembile kakhulu, oku kuthetha ukuba indlela yokusebenza iya kuba lula. Inokhetho olunomdla kakhulu lwamagcisa omfanekiso, isixhobo sokuzinzisa ibhrashi, kunye nombala ophumayo wombala, imathiriyeli yokuchukumisa, njl.
Enye ye ezona zokusebenza zidumileyo zokuhlela ifoto kwizixhobo eziphathwayo, i-VSCO ayinakuphoswa kwiscreen sakho esiphambili.
Sisicelo esiyilelwe ikakhulu ukuhlela iifoto ze ngokukhawuleza kwaye iguqulelwe kwiintanethi zentlalo. I-VSCO ifaka yonke into ukusuka kwizixhobo zokuhlela zakudala ukuya kwiisetingi zobuchwephesha kunye neziphumo. Inqaku elincomekayo lesi sicelo kukuba iitemplates ezenzelwe wena zinokugcinwa ukuze ziphinde zisetyenziswe.
Njengoko kunokubonwa ihlabathi leenkqubo zokubuyisela ifoto libanzi kakhulu, kwaye uludwe lwaluza kuqhubeka. Into efunekayo ngaphambi kokuba ukhethe enye kukucamngca ngento oyifunayo okanye ofuna ukuyenza ngokufota kwakho, kwaye ukusuka apho, khangela inkqubo ehambelana kakhulu naloo njongo.
Sikuphathele ingqokelela eneenkqubo ezili-11 zokuphinda uthintele, apho sinokukunceda kolo phando, lwahlulwe ngokweenkqubo zobungcali okanye ezisisiseko zokuphucula umgangatho.
Kufuneka ucinge ukuba ngundoqo inxalenye yobuhle boyilo, akusebenzi nje kuphela ngombala kunye nesicatshulwa, kusigqibo sokubonisa ubuso bakho obuhle kakhulu, yingakho imifanekiso esisebenza nayo kufuneka ibe ngqo kwaye ilula, ebamba ingqalelo yoluntu ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iiprogram ezingcono zokubuyisela ifoto